Global Voices teny Malagasy » Mametra Ny Fivarotana Trano i Shina, Mifanaraka Amin’ny Filàn’ny Vahoaka Ve Izany? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Oktobra 2017 5:43 GMT 1	 · Mpanoratra Jack Hu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Sary avy amin'ny Xinhua.net an'ny fanjakana.
Mba hampangatsiatsiaka ny tsenan'ny tany aman-trano mafana loatra, nandràra ny fivarotana indray ireo efi-trano mandritra ny roa hatramin'ny dimy taona taorian'ny fividianana izany ireo tanàna 50 mahery  ao Shina.
Nampidirina voalohany tamin'ny volana Aprily 2017 ny famerana, ahitana indrindra ireo tanàna  miisa 14 ambaratonga voalohany sy faharoa. Na izany aza, ny fanambarana farany tamin'ny 22 sy 25 septambra dia niitatra tamin'ny famerana ireo tanàna ambaratonga fahatelo na fahaefatra koa.
Satria ampiasaina hanasokajiana ireo tanàna Shinoa ny rafitra ambaratongan-tanàna mba hamolavolana sy handrafetana paikady ara-toekarena sy ara-politika mifototra amin'ny fitondrantenan'ny mpanjifa eo an-toerana, ny fidiram-bola, ny politika ary ny fironana eo an-toerana. Ny fampiharana ny famerana ny fividianan-trano any amin'ny ambaratongan-tanàna (efatra) rehetra dia milaza fa paikadim-pirenena amin'ny fiadiana amin'ny fiakaram-bidin'ny tany aman-trano izany.
Raha nilaza  ireo mpaneho hevitra mpomba ny governemanta fa hanery ireo mpitady tombontsoa mba handao ny tsenan'ny tany aman-trano ny politika, ny sasany kosa nampiseho fisalasalana momba izany ary nampitandrina fa hampihena ny tolotra eny an-tsena sy hanakana ny sandan'ny tany aman-trano tsy hidina ny fampiatoana ny varotra
Mandritra izany, bilaogera malaza momba ny vaovao ara-toekarena Shi Han Bing nanamarika tamin'ny lahatsoratra bilaogy be mpizara  fa momba ny fiarovana ny rafitra ara-bola ao amin'ny firenena kokoa ny anton'ny famerana fivarotana trano:
Nampihitsoka ny fiovaovan'ny vidin-trano eny an-tsena ihany koa ny fampiatoana ny fahabetsahan'ny tsenan'ny tany aman-trano. Fanapahan-kevitra lehibe izany mba hiarovana ny banky – nahatratra 2972 miliara yuan RMB [eo ho eo amin'ny 447,8 miliara dolara Amerikana] ny totalin'ny fanaovana antoka amin'ny tany aman-trano tamin'ny volana jona 2017. Raha midina tampoka ny vidin'ny trano aman-tany, mihena be ihany koa ny sandan'ny fiantohana, ho voa mafy ny banky ary tandindomin-doza ihany koa fiarovana ara-bola an'i Shina. Namindra ny loza tany amin'ireo nividy trano amin'ny taha ambony ny fampiatoana ny fahabetsahan'ny tsenan'ny tany aman-trano ary ho lasa vondron'olona miaro ny rafitra ara-bola izy ireo.
Nanazava ihany koa ilay bilaogera fa arovan'ilay politika ny tombontsoan'ny governemanta ifotony :
Voalohany, efa nampirina ny vola azo tamin'ny fivarotana tany sy ny hetra hanaovan'izy ireo fidiram-bola ny governemanta eny ifotony; Faharoa, taorian'ny fampiatoana ny fivarotana trano “ahazoana tombontsoa ara-bola”, hividy trano [mivantana] ireo izay tena mila izany, izay midika fa mbola afaka mivarotra tany sy manangona hetra ny governemanta:
Ny politikan'ny Tahiry Federaly ao Etazonia dia manana andraikitra amin'ny fanapahan-kevitr'i Shina hametra ny fivarotana trano aman-tany, hoy ihany koa ilay bilaogera hoe:
Nanambara i Yellen, lehiben'ny Tahiry Federaly Amerikana tamin'ny 20 Septambra fa hanomboka hampihena ny tombam-bokany amin'arivony miliara maro ny andry amin'ny volana Oktobra. Hanintona renivola manerantany ho any Etazonia ny fanapahan-kevitra ary hametraka fandrahonana vaovao ho an'ny tahirim-bola vahiny any Shina. Hampitsahatra ny famoahana vola amin'ny tany aman-trano sy ny fitobahan'ny vola vahiny ny fampiatoana ny fitobahan'ny tsenan'ny trano aman-tany. Avy amin'izany no ahitantsika an'i Yellen nanambara ny fampihenana ‘ny tombam-bokatra tamin'ny 20 septambra ary nanao fanambarana haingana momba ny fanitarana ny fampiatoana ny fivarotana amin'ny tsenan'ny tany aman-trano manerana ny firenena indray i Shina tamin'ny 22 Septambra.
Ny fahamarinan-toeran'ny fihariana trano aman-tany sy ny rafitra ara-bola no laharam-pahamehana ho an'ny mpitarika ny antoko alohan'ny hizoran'ny Kongresin'ny Antoko Komonista (indroa isaky ny folo taona) izay hanomboka amin'ny 18 Oktobra. Tamin'ny volana Aogositra, nisy manampahefana ambony iray nilaza fa voatohintohin'ny endrika fanararaotan'ny mpandraharaha momba ny tany aman-trano ny toekarena ao an-toerana. Nilaza koa ny manampahefana fa “naka an-keriny” ireo ivon-toerana ara-bola ny fandrahonan'ny tontolon'ny fivarotana tany aman-trano iray.
Saingy namaly tamin'ny tsy fitokisana sy fahatezerana tao amin'ny sehatra media sosialy toy ny Weibo ny mpiserasera. Betsaka no mihevitra fa mahatonga fiakaram-bidy ny famerana ny varotra tany aman-trano ary tsy mazoto hamela ny vidiny hihena ny mpitondra fanjakana.
Iray amin'ireo tanàna voalohany nampidirana ny famerana fivarotana trano tamin'ny volana Aprily 2017 i Hangzhou ary nahamarika ireo mpiserasera fa tsy misy fiantraikany amin'ny fampangatsiahana ny tsena ilay politika:
Jereo ny tsenan'ny tany aman-trano ao Hangzhou, vao mainka nampitombo ny vidin'ny trano ny famerana goavana amin'ny fivarotana trano. Mividy efitrano vaovao ny mpividy. Midika fiakaran'ny vidin-trano tsikelikely ve ny fanitsiana?
Mampihena ny fahabetsahan'ny tolotra eo amin'ny tsena fotsiny ny governemanta raha tokony haka hetra amin'ny tahiry. Fitahanareo ve ny vahoaka?
Miharihary fa miaro ny halafon'ny vidin'ny trano ny famerana vaovao.
Nisy ireo nanao fanamarihana maneso, tahaka ity iray ity:
Andevom-pananan-tany aman-trano mandrakizay mikarakara ny filàn'ny firenena? Tsy izany ve no sosialisma?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/23/108025/
 tanàna 50 mahery: http://www.westca.com/pda/news/op=view/sid=602989
 nanamarika tamin'ny lahatsoratra bilaogy be mpizara: https://www.letscorp.net/archives/123711
 Tahiry Federaly Amerikana : https://www.cnbc.com/2017/09/20/fed-approves-october-reversal-of-historic-stimulus-leaves-rates-unchanged.html
 naka an-keriny” : http://www.globaltimes.cn/content/1008249.shtml